Top 10 Best DVD gubi for Windows 10 =
Tiro balaadhan oo ah hababka ayaa la heli karaa waxaa loogu talagalay dadka dunida casriga ah si ay dadka kale la wadaagaan xogta ay. Guba in DVD ah ka haya meel caan ah iyaga. Si aad u gubi xogta si DVD ah, waxaad u baahan tahay inaad raadsato gargaar ee software DVD wax gubaya. Ma waxaad doonaysaa gubi ugu fiican DVD for Windows 10? Halkan waxaa ku qoran liiska dhowr codsiyada DVD gubashadii caan ah in ay diyaar u yihiin Windows 10 isticmaala.
Qeybta 1: Top 10 Best DVD gubi for Windows 10
Nero la oran karo waa sida software ugu caansan DVD gubanaya heli karo ilaa taariikhda. Shirkada ayaa waxaa tan iyo sanadkii 1995 oo qof oo ku nool gees kasta oo adduunka ah u isticmaalaan xogta gubanaya galay DVD faaruq ah. The 2015 Suite yimaado oo ay la socdaan tiro balaadhan oo ah sifaatka aad u sareeya oo ay ku jirto awoodda ah in ay gubaan DVS, nuqul ka DVDs iyo videos tafatirka iyo sanamyadii. Nero DVD gubi for Windows 10 ayaa sidoo kale qaadan kartaa daryeelka ee geeddi-socodka compressing waraaqaha ka hor guba galay disk ah. Awoodda in ay ka saarto xogta dhawaaqa hor disk gubanaysa la oran karo waa sida muuqaal gaar ah oo loo heli karaa Nero 2015.
Baro wax badan oo ku saabsan Nero 2015 >>
2. Ashampoo Gubidda Studio 14
Tani waa hab DVD xoogan gubashada laga heli karo suuqa. Waxay awood u leh in samatabbixin cajaladaha raadinaya yaqaana in dadka isticmaala ay. Shirkada ayaa waxaa tan iyo sanadkii 1999 oo ay ku xiran yihiin mashaariicda gubashadii ugu Marexaan. Waxaa loo isticmaali karaa si ay u gubaan DVDs, nuqul ka DVDs iyo dhaqaaqo diiwaanka ee qalabka aad mobile galay DVD. Waxa kale oo ay nuqul ka kartaa cajaladaha noncommercial oo kaa caawin in xaalkaa videos ama images hortiisa ka ololaya.
Baro wax badan oo ku saabsan Ashampoo Gubidda Studio 14 >>
BurnAware la aqoonsan yahay sida software caan ah DVD dab ololaya ay kulmaan dhowr baahida xoog. Waxaa ka mid ah dayanayaan cajaladaha iyo soo saarida files audio. Horumarinta ayaa ka mid ahaa saddex gaar ah sii daayay Suite ah. Mid ka mid ah waxaa loo isticmaali karaa si ay u gubaan DVD. Haddii aad raadinayso gubi ah DVD aasaasiga ah ee Windows 10 oo leh qaar ka mid ah umadaha dheeraad ah, oo aad ka fikiri karaa socda, waana taas daraaddeed.
Baro wax badan oo ku saabsan BurnAware Premium >>
4. Aiseesoft DVD gubi
Tani waa codsi u fiican diyaar u ah samaynta DVD-shaqsi. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si gaar ah loogu talagalay gubashada disk oo aan idiin noqon doonaa awoodaan inay sameeyaan wax kasta oo kale. Haddii aad rabto in aad nuqul DVD, waxaad u baahan doontaa inaad raadsato taageero codsi kale. Waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah codsiyada kale abuuray by Aiseesoft oo loo isticmaali karo si loogu badalo PDFs, nuqul ka DVDs iyo la shaqaynta hawlaha tafatirka. Haddii aad rabto in aad waxyaabahan, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso si gooni gooni ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Aiseesoft DVD gubi >>
5. EarthSoft DVD Gubidda
Haddii aad Ujeedada ugu weyn waa in nuqul DVDs, tani waa software-ka waa in aad iibsato. Gubi DVD Tani for Windows 10 yimaado oo ay la socdaan fudud iyo interface nadiif ah. Waxay ka dhigi kartaa tus dhamaystiran oo videos kaliya. Si kastaba ha ahaatee, qalab loo isticmaali karaa hal hawl ah tiro ka mid ah DVD-mar. Interface The fudud ayaa kaa caawin doona in ay ka fogaadaan ka kaaftoomi oo wuxuu oofin si hufan halka dayanayaan DVD.
Baro wax badan oo ku saabsan EarthSoft DVD Gubidda >>
Gubashada Express waxaa loo isticmaali karaa si ay u gubaan badan oo kala duwan oo ay ku jiraan cajaladaha DVD-yada. Waxaa kaloo loo isticmaali karaa si ay u gubaan sawirada ISO. Si kastaba ha ahaatee, waxaa karo ma loo isticmaalaa in lagu nuqul DVDs noncommercial sida aysan u leeyihiin awood kelmadaha kasta. Software Tani waxaa loo qoondeeyey in dayanayaan duplicating DVDs aan gurguurato dhererka iyo. Waa inta lagu jiro geedi socodka koobiyeynta daba yaac iyo hawgalka. Waxaad sidoo kale la siiyaa yar fursadaha tafatirka xadidan.
DVD 7. Khamriga Gubidda 120%
Tani waa DVD gubanaya qalab kale oo caan ah oo laga heli karo suuqa. Waxay awood u leh in nuqul DVDs iyo kulan ay la socdaan cajaladaha kale writable. Waxaad kaloo isticmaali kartaa aalad si images disk. Gubi DVD Tani for Windows 10 yimaado oo ay la socdaan tiro badan oo ka mid ah codsiyada freeware. Haddii aadan dooran waxa habboon in aad soo dajiyo marka rakibaadda ah, waa in aad raacdaa habka ku niyad ah oo ay ka saareen kuwa freeware gacanta. Alcohol 120% loo isticmaali karaa in aad nuqulka cajaladaha xirfadeed iyo weliba. Dhab ahaantii waxa uu door weyn ka dambeeya ay caan ku dhex casriga isticmaala computer adduunka. Waxa kale oo uu samatabbixin karo shaqeynta degdeg ah si ay dadka isticmaala ku.
8. Leawo DVD gubi
Leawo DVD gubi waxaa aad loogu yaqaanaa ay awood unscrambling. Waxaa intaa dheer in, tiro balaadhan oo ah qaababka cusub ayaa la jirrabay users computer in uu lacag ku gubi DVD, waayo, Windows 10. Waxaa ka mid ah interface dheecaan iyo tayada nuqul sare. Waxa uu awood u leeyahay in decrypt, yahan oo nuqul ka DVDs soo galeen disk adag ee your computer sidoo kale. Markaas waxaad u isticmaali kartaa software ka mid ah si ay u gubaan xogta gaadhay DVD ah ka dib. Waxa uu soo bandhigay muuqaalada oo dhan iyada oo loo marayo madal hal iyo waxa uu ka qayb qaatay wax badan oo ku wajahan ay caanka ah ee Leawo.
Baro wax badan oo ku saabsan Leawo DVD gubi >>
9. VOVSoft DVD gubi
Inkastoo VOVSoft waxaa loo isticmaali karaa si ay u gubaan tiro balaadhan oo ah cajaladaha writable, waxaa wanaagsan on DVDs ka shaqeeya. Sidaa darteed, VOVSoft waxaa sidoo kale loo yaqaan mindi ciidamada Swiss ee adduunka ku gubanayso disk indhaha. Habka DVD ku gubanayso waa sahal oo aad siin doonto fursad ah in ay ka fogaadaan ka kaaftoomi doono. Qalab ku ool ah ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in RIP DVDs iyo nuqul xogta galay aad disk adag.
Gubi DVD Tani for Windows 10 uu awood u leeyahay in samatabbixin wax soo saar tayo wanaagsan leh in dadka isticmaala ay. Waxaa ka samatabbixin doonaa gacanta buuxa aad in ka badan ku dhowaad dhammaan dhinacyada kala duwan ee geedi socodka koobiyeynta. Waxaad kaloo isticmaali kartaa goobaha default oo ha sameeyo shaqada aad u. Mid ka mid ah sifooyinka gaar ah in loo arki karaa in DVD Cloner waa in waxa loo isticmaali karaa in aad nuqulka DVDs xoqo. Haddii aad raadinayso hab ku haboon inuu soo nooleeyo wixii DVD aad dhaawacan tahay dib, tani waa ikhtiyaarka ugu fiican la heli karo waxaa ku jira suuqa si ay isugu dayaan. Waxa kale oo ay kaa caawin kartaa in aad nuqul DVDs iyo xogta yahan galay drive adag.
Baro wax badan oo ku saabsan DVD Cloner >>
Qeybta 2: Xulashada More ee DVD Advanced & Professional gubi ah u Windows 10
Wondershare DVD Creator waa kan qumman iyo kan fudud in la isticmaalo DVD gubi in uu yahay compatibel la Windows ay ka mid yihiin Windows 10, iyo lateste Windows 10. barbardhigo dhammaan qalabka DVD gubanaya kor ku xusan, waxa ay leedahay faa'iidooyin u gaarka ah. Iyadoo arrimo DVD menu fiican dhisay-in, waxa aad awoodi kartaa in la abuuro DVD cajiib badan abid. Iyo habka gubanaya waa ka dhaqsi badan tahay sida aad ka filan in ka hor inta aadan waxaa lagu soo bandhigay xaq idinka soo hor jeedda.
Taageerada videos gubanaya in ku dhawaad ​​kasta oo caan ah qaabab video.
Burns videos in DVD ah oo khibrad leh 40 arrimo menu + xirfad loogu talagalay.
Personalizes videos iyo arrimo menu u doonaya ka hor cajalid gubanaya.
Awood aad si ay u abuuraan slideshow sawir qosol badan si ay ula wadaagaan saaxiibada iyo qaraabada.
Sida loo Guba Video inay DVD la Wondershare DVD Creator for Windows 10 (Windows 10 ka mid)
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda this Wondershare DVD gubi, kaliya jiidi oo hoos u files si aad u codsiga, ama guji "Import" on interface ka.
Guji "Guba" badhanka hoose ee software this, oo aad ku doorato qaab DVD doonayo ka disc DVD, DVD folder iyo files ISO.
> Resource > Windows > Top 10 Best DVD gubi for Windows 10